Kiiska Keyboard-ka ugufiican ee Samsung galax tab A7 lite 8.7 inch 2021 keyboard-ka bluetooth Funda Manufacturer and Factory | Socodka
Kiiska keydka ee Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 inch 2021 keyboard-ka Bluetooth Funda
HADA TABABARKAAGU SIDA LATOP
Makiinad raaxo leh mahadsanid furayaasha sissor iyo jajabyo tayo sare leh, sidaa darteed gacmahaagu ma dareemi doonaan daal. Safarka furaha waa 2 mm, kaas oo bixiya qoto dheer qoto dheer ee xawaaraha iyo raaxada.
Istaag oo si fudud ugu shaqee
Iyada oo jeexjeexyada anti-boodka, kiniinigaagu wuxuu kuxiran yahay meesha saxda ah ee wax qorista oo si adag ayuu meesha ugu jiraa xitaa marka aad wax ku qoreyso meelaha aan sinnayn sida dhabtaada. Marka waxaad si fudud u furi kartaa kiiska, oo aad u bilaabi lahayd shaqadaada hal mar.
Lagu dhisay magnet xoog leh, daboolka kiisku si aamin ah ayuu u xirmayaa marka aadan isticmaalin.
Markaad isticmaasho, kumbuyuutarka kumbiyuutarka ayaa lagu xayeysiin karaa daboolka. Ma dhaqaaqi doono mana dhici doonto.
KIISKA LAGU SAMEEYO
Dibedda: laga sameeyay maqaar PU oo waara, ka ilaali kaniinigaaga boodhka, dhibicda iyo xagashada.
XAALADDA KEYBOARD EE LA SOO CELI KARO
Kiiboodhka Bluetooth wuxuu adeegsadaa batteriga lithium-ka dib loo buuxin karo si uu ugu awoodo kumbuyuutarka. Thanks to nidaamka awoodda smart, waxay socotaa illaa 3 sano iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo.
SAHLAN SI AAD U SAMEYSATO QAADKAAGA
Sida loo xiro keyboard-ka bluetooth
1. Ku riix batoonka "DAAR". Iftiinka korontada ayaa daaran
2. Riix badhanka CONNECT. Iftiinka Bluetooth-ka ayaa daaran.
3. Fur bluetooth-gaaga tabkaaga, ka dibna raadi oo isku xir "Keyboard Bluetooth 3.0".
4. Kiiboodhka Bluetooth wuxuu si otomaatig ah isugu xiri doonaa wixii hadda ka dambeeya, marka aad furto bluetooth iyo keyboard.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 222mm x 140 mm x 15 mm
Baaxadda: 8.7 ”Naqshadeynta: kiiska kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee wireless-ka ah
Wakhtiga la bixinaayo: Wakhtiga la bixinayo: 3-5 maalmood oo shaqo ah Waxyaabaha: Daboolka maqaarka ee ugu sarreeya ee leh kiiska PC
Nooca Kiiboodhka: Ruush, Isbaanish, Ingiriis, Jarmal, Faransiis iyo noocyo kale oo luqado ah
Hore: Kiis Magnetic Xoog leh Wixii iPad Air 4 10.9 inji ah 2020 Kiiska Ultra Slim Cover
Xiga: Anti-fall Shockproof case for Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 2021 oo leh garabka garabka